Rohingya Crisis-4 – Rohingya Language Foundation
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နာရီလောက်က TRT World နဲ့ Live အင်တာဗျူးလုပ်ထားတာပါ။ ဗမာစစ်သားတွေရဲ့ သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် ရိုဟင်ဂျာ ၄၀၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ရပြီး၊ ၂၇၀၀၀၀ ကျော် တစ်ဖက်နိုင်ငံမှာ သွားခိုလှုံနေရတယ်။ နောက်ထပ် ၂၀၀၀၀၀ လောက် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီး ထွက်ပြေး ခိုလှုံဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။My interview with TRT World today. At least 4000 Rohingya civilians have been indiscriminately killed by Myanmar Army. 270000 already fled to Bangladesh and another 200000 are stranding to cross the border. The situation is worsening day by day. Myanmar government is doing two tasks – one is to cleanse Rohingya population and another is to implement their economic projects in Northern Arakan State.
Slået op af Ro Nay San Lwin i Fredag den 8. september 2017